‘अर्बौंको सम्पत्ति तीन करोड नेपालीलाई’
२०७४ फागुन १३ आइतबार १५:५८:००
कान्तिपथको व्यस्त सडक । सवारीसाधनको मात्रै होइन, मानिसहरूको धौडधूप पनि बाक्लै छ । धन–दौलतको लोभ–लालसामा आफैँलाई बिर्सिनेहरूको मूलबाटोसँगै जोडिएको छ उनको घर– ‘श्रीकुञ्ज’ ।
तीन रोपनी तीन आना क्षेत्रफलको आलिसान घर । पुर्ख्यौली विरासतमा बाहेक बढ्दो महँगी र चुलिँदो व्ययभारबाट उम्किएर यही जुनीमा काठमाडौँको मुटुमा घर जोड्न सम्भव छैन, धनाढ्यहरूका लागिसमेत । मध्ययम वर्गीय परिवारका लागि त निकै परको कुरा हो यो । तर, श्रीजङ्ग शाह र रुद्रकुमारीले यो अर्बौं मूल्य बराबरको घरजग्गा सार्वजनिक अस्पतालका लागि अर्पण गरिदिएका छन् । शाह दम्पत्तिको चोला उठेको दिन ‘श्रीकुञ्ज’ नेपालगञ्जको फत्तेबाल आँखा अस्पतालको सम्पत्ति हुन्छ ।
रगत–पसिना गरेर जोडेको, जीवनभर भागदौड गरेर ठड्याएको घर किन आँखा अस्पताललाई दिए होलान् त दम्पत्तिले ?
यही प्रश्नले खुर्मुर्‍याएर हामीलाई कान्तिपथ पुर्‍यायो । ९४ वर्षीय वयोवृद्ध श्रीजङ्ग गाँस च्याप्दै थिए । आंशिक पक्षघातले कुँज्याएकी पत्नी रूद्रकुमारी पनि सकिनसकी भातका सिता गनिरहेकी थिइन् ।
दुवैको अनुहारको चाउरीपनसमेत बूढो भइसक्यो । पति कान सुन्दैनन्, पत्नीको दृष्यमा बादल लागिसक्यो । ‘अल्जाइमर’ पन्छाएर सम्झनाका पोथ्रा पल्टाउन हम्मेहम्मे हुन्छ रुद्रकुमारीलाई । एकछिनअघि के गरेँ, केहीबेरपछि पत्तो हुँदैन उनलाई ।
सम्पत्ति क्षणभङ्गुर लाग्न थालेपछि एकदिन श्रीजङ्ग हर्षित मुद्रामा प्रस्तुत भए, “श्रीकुञ्ज अस्पताललाई दान दिऊँ, के लाग्छ तिमीलाई ?”
“हजुरले भनेको सत्य कुरा कहिले नाइँ भनेकी छु र ?,” सहजै अनुमति दिइन् रुद्रकुमारीले ।
सत्य, निष्ठा, धर्म र कर्मको पथिक बनेका श्रीजङ्गकै अनुयायी थिइन् उनकी पत्नी । त्यसैले उनले नाइँनास्ती गरिनन् । बरु आँखा अस्पातलजस्तो ‘दृष्टिगृह’लाई घरजग्गा दिन पाउँदाका खुसी उनको आँखाभरि छचल्किए । बाँचुञ्जेल खुसी भोग र मरेपछिको मोक्ष प्राप्तिको दिलाषाले उनलाई आह्लादित तुल्यायो ।
“गुमनाम मर्नुभन्दा नाम राखेरै बाटो लाग्नु बेस नि !,” पुलकित भावमा प्रस्तुत हुन्छिन् उनी ।
डोटीकी रुद्रकुमारीको श्रीजङ्गसँग मागि विवाह भयो । बिहेयता उनी श्रीमानको सुख–दुःखको साक्षी होइन, सहयात्री बनेकी छन् ।
जाजरकोटका रैथाने शाह हुन् उनीहरू, जाजरकोटे राजखलक । तर उनीहरू बेलैमा नेपालगञ्ज झरे । “नेपालगञ्ज झरे के भन्नु नि ! खेत किनेको, माथिको आयस्ताले मात्रै नपुग्ने !,” झन्डै चार पुस्ताअघि फर्किए श्रीजङ्ग ।
खेत किनेर परिवार पोस्ने लोभमा नेपालगञ्ज झरेका बराजु अन्ततः जाजरकोटबाट विस्थापित भए । जाजरकोटमा जाय–जेथा धेरै पछिसम्म थियो । आफू नबस्ने, छोराछोरी जान नमान्ने भएपछि काका–भतिजाको अधीनमा छाडेर नेपालगञ्जबासी भएका हुन् उनीहरू ।
जाजरकोटका राज–खलक । काठमाडौँसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुने नै भयो । बाबु काठमाडौँ आए । र, यतै जन्मिएका हुन् श्रीजङ्ग ।
कलकत्ता युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् उनले, राजनीतिशास्त्र, डिप्लोम्यासी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेतमा । “घरको कान्छो छोरो यत्ति त पढ्नैपर्यो नि,” ९० को उमेरमा पनि स्फूर्त देखिन्छ अनुहार र सुनाउन थाल्छन्, “साढे दुई दशक त सरकारी सेवामा बिताए हुँला । यो जायजेथा त्यसैको उपलब्धि त हो !”
नेपाल राष्ट्र बैंकको अल्टरनेटिभ गभर्नरसमेत रहेका उनले नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)मा प्रतिनिधित्वसमेत गरेका छन् । त्यसका अतिरिक्त तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमको निर्देशकसमेत बनेका श्रीजङ्गका लागि अमेरिका पानी पँधेरो थियो ।
“राष्ट्र बैंकमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा धेरैपटक अमेरिका ओहोरदोहोर गरेँ,” अनुभव पोख्छन् उनी ।
२०३९ सालतिर हुनुपर्छ । धूमिल सम्झनामात्रै छ उनलाई । आमा बालदिव्यश्वरीको आँखामा अचानक समस्या देखा पर्यो । त्यहाँको स्थानीय ओखतीमूलो, चिकत्सकीय सेवाले मात्र आमाको समस्या दूर भएन । दृष्टि नै बाँझिएला भन्ने भय पो भयो । हतारहतार भारतको सीतापुर पुर्याएर निको पारियो ।
“अस्पताल नहुँदा त्यसबेला हामीले निकै दुःख पायौँ । दुई महिना भारत बास भयो । त्यही दुःखले पनि फत्तेजङ्ग आँखा अस्पतालको थालनी गरेका हौँ,” सुनाउँछन् उनी ।
तिनताकाको अर्को सम्झना पनि छ उनलाई । देहातीहरूले आँखाको निकै समस्या बेहोरेका थिए । सधैं एलर्जी हुने, जलविन्दु हुने, राताराता देखिने आँखा ।
अशिक्षा र गरिबीले थल्याएका देहातीहरू झारफुकको भरोसा गर्थे, अस्पताल थिएन । जडिवुटी निचोरेर आँखामा हाल्दा कतिपयको दृष्टि नै बाँझिन्थ्यो ।
“देहातीहरूको दुर्दशाले पिरोल्नु पिरोलेपछि पिताश्रीले नेपालगञ्जको घर दान दिएर आफ्नै नाममा स्थापना गर्नुभएको हो, फत्तेबाल आँखा अस्पताल,” अस्पताल स्थापना गर्नुको कारण उधिने उनले ।
विसं. २०४३ ताका स्थापना भएको हो त्यो अस्पताल ।
फत्तेबाल आँखा अस्पताल पश्चिमको ‘दृष्टिलय’ बनेको छ । दश शैय्याबाट सुरू भएको अस्पताल डेढ सय शैय्यामा रूपान्तरण भएको छ । नेपालकामात्रै लाभान्वित छैनन्, भारतका सीमावर्ती जिल्लाबाट वर्षेनी हजारौँको संख्यामा उपचार गराउन आउँछन् । ज्यादातर विरामी दक्षिणबाटै आउँछन् ।
“बडा दुख्खले स्थापना गरेको हो त्यो अस्पताल । डाक्टर नर्स बस्न नमान्ने । नेत्रज्योति सङ्घले पनि सहयोग गर्यो । स्वीस रेडक्रसले त दश वर्षसम्म चिकित्सक–नर्स नै उपलब्ध गरायो,” उनी सम्झन्छन् ।
“अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि भारतीय दूतावासले पाँच करोड र बाँके जिल्लाले एक करोड विनियोजन गरेको छ,” अस्पतालको प्रगतिबाट पुलकित छन् उनी ।
आफैँले जन्माएको संस्था झाँगिन र लहराउन थालेपछि घर किन दान नदिने भन्ने प्रश्न सघन बनेपछि उनले आफैँ बसेको मुकाम अर्पण गरिदिए । र, दानवीर कहलिए ।
त्यसभन्दा अघि थुप्रै सङ्घसंस्था उनको सम्पर्कमा नपुगेका होइनन् । घरसम्पत्ति दान गर्ने थाहा पाएकाहरूले सहयोगको याचनासमेत गरे ।
तर, बाबुले स्थापना गरेको संस्थालाई हुर्काउनु पितृऋण तिर्नु हो ठानेका श्रीजङ्गले अस्पताललाई नै मरणोप्रान्त सम्पत्ति सुम्पिने निधो गरेका हुन् ।
ईश्वरी राणा उनकी एक्ली छोरी हुन् । बैंकर अनिल केशरी शाह उनका नातिनी ज्वाइँ पर्छन् । अस्पताललाई दान दिने विचार उत्पन्न भएपछि उनले छोरीसँग सल्लाह गरे । सहजै राजी भइन् उनी ।
तर, केही समयपछि उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।
“नपुग्दो केही छैन । उनलाई दिनुपर्ने मैले दिएकै थिएँ । उ...अघिल्तिरको घर उनकै भोगचलनमा छ । अस्पताललाई घर दिने भनेपछि सुरूमा खुसी पनि भएकी थिई । पछि कसले के भन्यो !,” अनुहारमा खिन्नता छायो उनको ।
छोरीलाई सहमत गराउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । “छोरीको मेरोभन्दा बढ्ता सम्पत्ति छ । नेपाल र भारतमासमेत गरी पाँचवटा त घरमात्रै छ । सन्तानको मुख मारेर दिन पनि लागेको होइन,” प्रष्ट छन् उनी ।
“सम्पत्ति मेरै अधीनमा थियो । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रयोग गरेर अस्पताललाई दान गरेको हुँ,” उनी छोरीसँग दुःखमनाउ पनि गर्दैनन् ।
घरको छेउमा बुद्धको स्तुप निर्माण गरेका छन् र ध्वजासमेत फहराएका छन् । त्यसका अलावा उनी भागवत, गीता, बाइबलमा उत्तिकै आँखा पुर्‍याउँछन् । र, सबै ग्रन्थको सार मानव–हित नै पाउँछन् । त्यसैले नै घर गरेको हो उनलाई सत्मार्गमा हिँड्न । सम्पत्ति अर्पण गरेर दृष्टि बाँड्न सघाउन बुद्धादि दर्शनहरूले नै अभिप्रेरित गरेका हुन् उनलाई । लाग्छ– उनका सम्पत्तिले लाखौँलाई दृष्टिमात्रै दिँदैन, दान र सेवाको क्षेत्रमा अघि बढ्न बाटो देखाउँछ पनि ।
“जीवनको सार नै मानवसेवा रहेछ भन्ने बुझेपछि दानका लागि तत्पर भएको हुँ,”घरजग्गा दान गर्नुको तात्पर्यसमेत बताउँछन् उनी ।
९४ वर्षसम्म कसरी बाँचेँ ?
केही समयअघि उनलाई हृदयघात भयो, निको पनि भयो । त्यसबाहेक शरीरमा देखिने रोग अरू छैनन् । ९४ वर्षको उमेरमा पनि हिँड्डुल गर्न सहारा चाहिँदैन ।
९० कै उमेरकी पत्नीलाई तीन वर्षअघि प्यारालाइसिस भयो । बेलुका सारसौँदो सुतेकी उनी भोलिपल्ट हर नचल्ने भएर उठिन् ।
“९४ पुगेर ९५ वर्ष लाग्न लागेँ, यो उमेरसम्म म कसरी बाँचे हुँला । उही सत्मार्गकै फल त होला,” विधातालाई आशीर्वादसमेत दिन्छन् उनी ।
उनलाई एउटा कुराले असाध्यै पिरोलेको छ– समयसँगै मानिसमा त्यागको भावना मर्दै गयो । समाज, परिवारमात्रै होइन, देश नै दोहन गरेर भए पनि पैसा कमाउनेलाई आफ्नो कृत्यले मार्गनिर्देश गर्ने उनको विश्वास छ ।
“अर्बौं कमाउनेहरूले कमाइको केही हिस्सा समाजलाई बाँडून् भन्ने मेरो अभिप्राय हो । मैले अस्पताललाई मात्रै होइन, ३ करोड नेपालीलाई सम्पत्ति अर्पण गरेँ,” यति भनेर कुराकानी अन्त्य गरे उनले ।